Magacyada wadaado dowlada Kenya lacag ka xayirtay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dhowr ka mid ah wadaadada laga yaqaano dhulka Soomaalidu degto ayaa ka mid noqday dad badan oo ay dowladda Kenya ka xanibtay hantidooda, kadib weerarkii Alshabaab ku qaadeen Jaamcadda Gaarisa ee lagu dilay 148 ruux.
Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo wax ka aqriya masjid ku yaalla magaalada Nairobi iyo Sheekh Xasan Maxamuud Takar oo Alshabaab la jira ayaa ka mid noqday dad gaaraaya 86 xubnood oo laga xiray akoonadii ay ku lahaayen Bankiga Dhexe ee Kenya.
Bandhiga Dhexe ee Kenya (Central Bank of Kenya), ayaa amarkan ku soo rogay Xawaaladaha Somalida Kenya iyo 86 qof, oo sida uu sheegay ay kala laabteen rusqadihii ay heysteen.
Madaxa Alshabaab ee Kenya, Axmed Iimaan Cali, Sheekh Maxamed Dulyadeen iyo C/qaadir Maxamed C/qaadir (Cikrama), ayaa ka mid ah dadka xisaabaadkoodii laga xanabay, isla-markaana ay Kenya sheegtay inay si gaar ah isha ugu heyso.
Dadka sida gaarka ah xisaabaadkooda looga xiray, ayaa waxaa lagu tuhmayaa inay taageero u fidinayeen Ururka Al Shabaab, halka qaarkoodna ay yihiin saraakiil sarsare oo ka tirsan ururukaas.
Sheekh Maxamed Cabdi Umal, ayaan la garanayn waxa sababay in Dowladda Kenya ku tuhunto Ururka Al Shabaab, xilli lagu xusuusto in Shabaabku uu si kulul ugu weeraro Muxaadarooyinka uu jeediyo.
Kenya waxay u muuqataa in arrintan ay kaga jawaabeyso weerarkii uu dhiigga badani ku daatay, ee Khamiistii ka dhacay Magaalada Garissa.
Akhri: Uganda oo xirtay Soomaali sawiranayey iskuul